प्रदीप र साम्राज्ञीको जोडी कति सुहायो ? « Ramailo छ
प्रदीप र साम्राज्ञीको जोडी कति सुहायो ?
यतिबेला दुई युवा स्टारको तस्बिरले चर्चा पाइरहेको छ । प्रदीप खड्का र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको तस्बिरलाई लिएर अनलाइन मिडियामा समाचार बनिरहेका छन् ।
एक विज्ञापनमा प्रदीप र साम्राज्ञी सँगै देखिंदैछन् । उनीहरु सँगै मिस नेपाल इन्टरनेश्नल २०१८ नीति शाह पनि उक्त विज्ञापनमा देखिंदैछिन् । चर्चा भने प्रदीप र साम्राज्ञीको छ । किनकी यी दुई हालका फिल्म दुनियाँका स्टार हुन् । उसो त यी दुई स्टारालाई लिएर फिल्म बनाउने तयारी पनि नभएको होइन् । तर साम्राज्ञीले यसमा रातो कार्ड देखाइदिइन् ।
सुवास गिरीले निर्माण गर्ने फिल्म ‘भैरवी’ मा प्रदीप र साम्राज्ञी खेलाउने प्रयास असफल भएको थियो । विज्ञापनमा सँगै देखिएका प्रदीप र साम्राज्ञी फिचर फिल्ममा चाहिं कहिले सँगै देखिएलान् त ? सायद फ्यानको यही प्रतिक्षा हुनु पर्छ ।